ကြံခိုင်ရေးနှင့်တပ် ကိုယ်စားလှယ် ၅ဦး ဆွေးနွေးသည့်စကားရပ်အချို့ လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ ပယ်ဖျက် | People Power Myanmar
Zoom App သုံးပြီး ကုမ္ပဏီတိုက်ရိုက် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
ဂျပန်အစိုးရလှူထားသော ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းများကို အိန္ဒိယအစိုးရက စာကြည့်တိုက်ပစ္စည်းနှင့်ဆော့ဝဲလ်များထောက်ပံ့မည်
ဒေသန္တရအမိန့်အားဖောက်ဖျက်ပြီးလူစုလူဝေးဖြင့်မဂ်လာဆောင်သည့် တမူးမှ ပြည်တော်ပြန်ကိုအမှုဖွင့်အရေးယူ
ရှုံးမှာကြောက်၍ ရွေး/ကော်ကို ဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပြော
ICJ ကိစ္စ နိုင်ငံသားအားလုံး တသားတည်း ရပ်တည်ထောက်ခံကြရမည့်အချိန်ဟု NLD ကြေညာ
ကြံခိုင်ရေးနှင့်တပ် ကိုယ်စားလှယ် ၅ဦး ဆွေးနွေးသည့်စကားရပ်အချို့ လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ ပယ်ဖျက်
တေးသံရှင်ဖြိုးပြည့်စုံ၊ရော်နီစန်းလွင် နှင့် လူငယ်စာရေးဆရာငြိမ်းချမ်းကို တို့ကို အမှုမမြောက်၍ ပြန်လွှတ်ပေး
တစ်ယောက် တစ်ပေါက် (ကာတွန်း – စိုးစံဝင်း)
ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းအား ကုသိုလ်အလုပ်များ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြမှုအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျေးဇူးတင်နေ(ရုပ်သံ)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်တို့ စုံခုံ ဖွဲ့စစ်မည်
မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့အ‌ပေါ် PNLOနာယကရဲ့ ‌ပြောဆိုချက်ဟာ ၎င်းရဲ့သ‌ဘောထားသာ ဖြစ်ပြီး PNLOအဖွဲ့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့‌ပြော
မီတာဖတ်သည့်စနစ်ကို ရန်ကုန်တစ်တိုင်းလုံးတွင် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသွားတော့မည်
ဗေဒင်အကြားမြင်ဆရာမ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း(အိတီ)ရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့် စတုဒီသာအလှူပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန်တိုင်းမြေစစ်အဖွဲ့၏ ဗိုလ်တစ်ထောင် BOAD ၊AODဝင်းမြေများမှာ ၁၉၈၈ ရှေ့ပိုင်းသိမ်းဆည်းခဲ့မှုဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် မမှန်ကန်ကြောင်း မြေပိုင်ရှင်များပြော
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် NCA လက်မှတ်ထိုးထားသော တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင် ၁၀ဖွဲ့၏ တွေ့ဆုံပွဲက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါသည့် အလှည့်အပြောင်းအချိုးအကွေ့ဟု ဆို
” ပုရိသတွေရဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့ Sexy Model ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ နန်းသီရိမောင်”
ဂျပန်နိုင်ငံ တွင် နာမည်ကြီး တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အသေးစားမြေပြိုမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့
၀န်ကြီးဌာနအသီးသီး၏ လျှပ်စစ်မီတာခ အသုံးစရိတ် ကျပ် ဘီလီယံ ၃၀ ကျော် စိစစ်ဖြတ်တောက်
ရန်ကုန်ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုန် မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့စဉ် ဒဏ်ရာရသူ ၁၇ဦးရှိခဲ့
by People Power Myanmar
သတ်မှတ်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုအားနည်းသည့်အပြင် လွှတ်တော်နာယကကို သိက္ခာအားဖြင့် စွပ်စွဲပုတ်ခတ် ပြောဆိုမှုများ ပါဝင်ဟုဆို
ကြံခိုင်ရေးနှင့်တပ် ကိုယ်စားလှယ် ၅ဦးတို့၏ ဆွေးနွေးခဲ့သည့်စကားရပ်အချို့ကို မှတ်တမ်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်က ကြေညာခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၄၄ ဦး တင်ပြထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လေ့လာစီစစ် ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ ၏အစီရင်ခံစာအပေါ် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦး ဆွေးနွေးခဲ့ရာ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်အချို့၏ဆွေးနွေးချက်များသည် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ နည်းဥပဒေပါ ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်း ကမ်းများ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိဘဲ လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဂုတ်သိက္ခာကို ထိပါးစေပြီး လွှတ်တော်အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို အထင်အမြင်မှားစေသည့် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများ ပါဝင်ကြောင်း စီစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် နှုတ်ပယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကပြောသည်။
Related- ဆက်စပ်ပတ်သတ်နေသော ရေးသားချက်များ
ဗိုလ်မှူးသောင်းထိုက်စိုး ၏ဆွေးနွေးချက်တွင်ပါဝင်သော “အစည်းအဝေး ကာလများတွင် မူဝါဒစနစ်ခိုင်မြဲစွာစွာ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဖတ်ရှု့လေ့လာစီစစ်ရင်း စနစ်ရှာနေ တာကောင်းနိုးရာရာမူဝါဒ ချမှတ်နေတာ စမ်းတစ်ဝါးဝါး လုပ်နေတာကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ် လျှောက် အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံလျှက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်”ဆိုသည့် ပြောကြားချက်နှင့် “မယောင်ရာဆီလူးနေ လျှင် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေရင်” ဆိုသော စကား အသုံးအနှုန်း များသည် လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ် ချက်နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသောလွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်၏ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဆောင်ရွက် မှု များကို ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုလ်မှူးဇင်မျိုးလတ် ဆွေးနွေးချက်တွင် ပါဝင်သော “ဘာ့ကြောင့် သဝေထိုးနေကြတာလဲ ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားမရပါဘူး”ဆိုသော စကားစုသည်လည်း အလား တူဖြစ်ကြောင်း ၊ မင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မြင့်၏ ဆွေးနွေး ချက်တွင်ပါဝင်သည့် “ဒီနေရာမှာ အခါအခွင့်သင့်လို့ ဆိုတာကစပြီး သွေးရိုးသားရိုး ဟုတ်ရဲ့လားဟု ကျွန်တော် ဒီနေရာကနေမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားစု တစ်ခုလုံးကလည်း ဆွေးနွေးဆဲ ကိစ္စ နှင့်တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်သောဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပြီး “ဒါ့အပြင် စိန်ခေါ်ချင်တာကတော့” ဆိုသည့် စကားလုံးအသုံးနှုန်းကလည်း မသင့်တော်သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ဗိုလ်ကြီး သန်းသန်းဝင်း ဆွေးနွေးချက်များတွင် ပါဝင်သည့် “အချိန်ဆွဲနေတာလား ပြင်ဆင်ဖို့စေတနာမရှိလို့ဟန်ပြနေတာလား၊ ယခုကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသော” ဆိုသည့်အသုံးအနှုန်းများကလည်း အထက်ကတင်ပြခဲ့ သည့်အတိုင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ဗိုလ်ကြီးဒေါ်သဇင်လှိုင်၏ ဆွေးနွေးချက်များတွင် “ဥပဒေနှင့်မညီတဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်”ဆိုသည့်စကား ရပ်များအပြင် စဉ်းစားရမည့် အချက်တစ်ချက်ကို တင်ပြလိုပါသေးတယ်ဆိုသော ထောက်ပြဆွေးနွေး လိုက်ရပါတယ်ဆိုသည့် ဆွေးနွေးချက်မှစပြီး ထောက်ပြဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုသည့် စကားရပ် ထိပြောဆိုချက်များသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၉ နည်းဥပဒေခွဲ(င) စ ဋ ဌ ပါ သတ်မှတ်ချက်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာမှုအားနည်းသည့်အပြင် လွှတ်တော် နာယကအပေါ် ဥက္ကဌ သိက္ခာအားဖြင့် စွပ်စွဲပုတ်ခတ် ပြောဆိုမှုများ ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
လွှတ်တော် နာယကအပေါ် ဥက္ကဌ သိက္ခာအားဖြင့် စွပ်စွဲပုတ်ခတ် ပြောဆိုမှုများ ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း
၎င်းအနေဖြင့် ရွေးကောက်တာဝန်ပေးချက်အရ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကတာဝန်ကို ဥပဒေ နှင့်အညီ ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကဆိုသည်။
“လွှတ်တော်နာယကရဲ့တာဝန်နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တာဝန်များဟာ သူ့အတိုင်းအတာနှင့်သူ များပြားကြီးမားလှပါတယ်။ သို့သော် ထပ်တူမဖြစ်တဲ့အတွက် နာယကရဲ့ တာဝန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် နားမလည်နိုင်တာ တစ်ဦးတစ် ယောက်တစ်စု တစ်ဖွဲ့၏ ဆန္ဒအတိုင်း မလုပ်ပေးနိုင်လို့ သဘောမကျတာရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အတိုင်းအတာရှိပါတယ်။ နာယကရဲ့တာဝန်ကျေပွန် အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် တာဝန်ရုပ်သိမ်း နိုင်တဲ့ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများ သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သလို မိမိရဲ့တာဝန်ရှိမှု အပိုင်းကိုလည်းကောင်း ကောင်း သိရှိနားလည်ပါကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်က ပြောသည်။
လွှတ်တော်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ချိန်ကစပြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (၈)ပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အသုံးပြုပြီးဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၊ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပြီး အကောင်းဆုံးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရှိကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ အဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခံရပြီးမှ ယခုကဲ့သို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ နာယကအနေဖြင့် သက်ဆိုင်သော တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဆောင် ရွက်နေသကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဥပဒေ နည်း ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ သူ့အချိန် သူ့အခါနှင့်အညီ အောင်မြင်ပြီးစီးအောင် ကြပ်မတ်တာဝန်ထမ်း ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
လွတ်တော်အစည်းအဝေးအတွင်း၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှု ထားပြီး လွှတ်တော်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ပြုမူပြောဆိုဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ၊ ဆွေး နွေးချက်များသည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် တိုင်း ရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတို့အတွက်အထောက်အကူပြုရှေ့ရှု့သည့် အသုံးအနှုန်း အပြုအမူ များဖြစ်ရန်လိုအပ်ပြီး လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့် ကို မှန်မှန်ကန်ကန်စည်းကမ်းရှိရှိ အသုံးချပြီး တာဝန်များကျေပွန်ကြရန်တိုက်တွန်းလိုကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ ပုဒ်မခွဲ (စ)တွင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် သတ်မှတ်ထား သော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဟု ပြဌာန်းထားသဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအနေဖြင့် တည်ဆဲဥပဒေပါ ကျင့်ဝတ်နှင့်စည်းကမ်း များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထို့ ကြောင့် အထက်ပါဖတ်ကြားခဲ့သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၅)ဦး၏ ဆွေးနွေးချက်အချို့ အား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၉ ၊ နည်းဥပဒေခွဲ(င) စ၊ ဋ ၊ဌ ပါ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်း များကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၂၀ နည်းဥပဒေခွဲ(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲငယ်(င)အရ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် စကားရပ်များကို လွှတ်တော်မှတ်တမ်းမှ နှုတ်ပယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ်ကကြေညာသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၃၀၀၀ ကျော်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမည်
People Power Myanmar
People Power မီဒီယာသည် ကိုယ်ပိုင်သတင်းလိုက်လံ ရရှိထားသော သတင်း များကို တင်ဆက်နေသော သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်သည်။ People Power Myanmar သည် လူငယ်သတင်းသမားများ စုစည်းလျက် ဘက်မလိုက်သော၊ တိကျမှန်ကန်သော သတင်းများကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အလွန်ရဲရင့်ပြီးသတ္တိရှိဟုရှရှားသံအမတ်ချီးကျူး
ICJ တွင် သွားရောက်ရင်ဆိုင်မည့် အတိုင်ပင်ခံအတွက် NLD လူထုထောက်ခံပွဲများလုပ်မည်
ဂူတာပြင်ရွာကိစ္စ သေဒဏ်အထိချမှတ်နိုင်သော စစ်တရားရုံးဖြင့် စတင်စစ်ဆေးစီရင်မည်
အစိုးရအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို မဖြစ်မနေတည်ဆောက်မည်ဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးဖြစ်
ထိုင်းဘုရင်၏အာဏာအသုံးပြုမှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဂျာမနီကို ထိုင်းအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများ စာပို့တောင်းဆိုမည်
People Power Myanmar သည် လူငယ်သတင်းသမားများစုစည်းလျက် ဘက်မလိုက်သော၊ တိကျမှန်ကန်သော သတင်းများကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။
© 2019 People Power Myanmar - Build Democracy with People Power. All right reserved. Developed by OrientWebs!.